ကွမ်တမ်မက္ကင်းနစ် | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London
Tag Archives: ကွမ်တမ်မက္ကင်းနစ်
သစ္စာတရားရှာဖွေရာ၌ တိကျသောအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များ လိုအပ်ခြင်း
သစ္စာတရားရှာဖွေရာ၌ တိကျသောအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များ လိုအပ်ခြင်း အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များသည် အရာရာ၌ လိုအပ်သည်သာဖြစ်သည်။ သိပ္ပံပညာ၏ ကျော်ဇောထင်ရှားမှု အများလက်ခံမှုနှင့် အောင်မြင်မှု၏ အခြေခံထဲတွင် တိကျသော အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုချက်များ ရှိခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည်။ ဥပမာ – ကွမ်တမ်မက္ကင်းနစ် ပညာမှ လွန်စွာနာမည်ကြီးသော မသေချာမှုနိယာမ (Uncertainty Principal) ကို ဖော်ထုတ်ခဲ့သူ ဟိုက်ဇင်ဘတ် (Heisenberg) သည် သိပ္ပံနှင့် ပတ်သက်၍ ဤသို့ တိတိကျကျ ပြောခဲ့ဖူးသည် – .. .. Any use … Continue reading →
Posted in Buddhism & Science	| Tagged Buddhism and Science, Myanmar Posts, ကွမ်တမ်မက္ကင်းနစ်, မသေချာမှုနိယာမ, အနိစ္စ	| 1 Comment
ခက်ခဲနက်နဲပါသည်ဟု ဆိုအပ်သော သိပ္ပံပညာရပ်ဆိုင်ရာ နိဒါန်းပိုင်း အခန်းကဏ္ဍ-4
Posted on April 14, 2012 by chitnge
ခက်ခဲနက်နဲပါသည်ဟု ဆိုအပ်သော သိပ္ပံပညာရပ်ဆိုင်ရာ နိဒါန်းပိုင်း အခန်းကဏ္ဍ-4 သက်ရှိထင်ရှား ထင်ပေါ်ကြော်ဇောသော စတီဖင်ဟော့ကင်း စတီဖင်ဟော့ကင်းသည် လောလောဆယ် သက်ရှိထင်ရှားလျှက်ရှိသော ထင်ပေါ်ကြော်ဇောသော သိပ္ပံ ပညာရှင် ဖြစ်သည်။ အဓိကအားဖြင့်တော့ သဘောတရားရေရာဆိုင်ရာ ရူပဗေဒပညာရှင် ဖြစ်သည်။ ဟော့ကင်းသည် လေ့လာသူတိုင်း ထူးချွန်သည်ဟု အသတ်မှတ်ခံရသော ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် သူသည် ဤခေတ်ကို စူးစမ်းရှာဖွေ၍ အထိုက်အလျှောက်တွေ့ရှိသောခေတ်ဟု သတ်မှတ် သည်။ ယင်းကိစ္စကို သူဂုဏ်ယူသည်။ စူးစမ်းရှာဖွေ နေကြသော ခေတ်၌ လူဖြစ်ရသည်မှာ ပျော်စရာကောင်း သည်ဟု မကြာခဏ … Continue reading →
Posted in Buddhism & Science	| Tagged ၀ိပဿနာ, Buddhism and Science, Myanmar Posts, ကွမ်တမ်မက္ကင်းနစ်, သိပ္ပံ, ဟော့ကင်း	| Leaveacomment
Stephen Hawking -13
Posted on July 20, 2010 by chitnge
သိပ္ပံပညာရှင် စတီဖင်ဟော့ကင်း -13 On the Shoulders of Giants ဆိုသော စာအုပ်မှာ Stephen Hawking က Edit လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၄င်းပြင် Commentary အနည်းငယ် ရေးသားသည်ဟု ဖွင့်ဆိုထားသည်။ ၄င်းစာအုပ်၏ ပထမ စာမျက်နှာတွင် အောက်ပါအတိုင်း ရေးထားသည် – – – စတီဖင်ဟော့ကင်းသည် သဘောတရားရေးရာ ရူပဗေဒနှင့် ပတ်သက်၍ အိုင်းစတိုင်း ပြီးသည့်နောက် အထူးချွန်ဆုံးသော ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် သတ်မှတ်ခံရသည်။ Stephen Hawking is … Continue reading →
Posted in Buddhism & Science, Frontpage	| Tagged Science, ကွမ်တမ်မက္ကင်းနစ်	| Leaveacomment
Stephen Hawking -9
Posted on July 18, 2010 by chitnge
သိပ္ပံပညာရှင် စတီဖင်ဟော့ကင်း -9 နှိုင်းရသီအိုရီများကို တွေ့ရှိထုတ်ဖော်ခဲ့သော အိုင်းစတိုင်း သည် (၁၈၇၉)ခုနှစ်က ဂျာမနီ၌ မွေးဖွားခဲ့သူဖြစ်သည်။ (၁၉၀၅)ခုနှစ်တွင် စာတမ်းသုံးစောင် ပြုစုခဲ့ရာ ထိုစာတမ်းများသည် ကမ္ဘာ့ဦးဆောင်သူ သိပ္ပံပညာရှင်များ စာရင်းတွင် အိုင်းစတိုင်းအား သွတ်သွင်းစေခဲ့သည်။ အိုင်းစတိုင်း၏ သီအိုရီများသည် အချိန်အပေါ်လည်းကောင်း၊ ကာလ ဌာန အပေါ်၊ အမှန်တရားအပေါ် ကျွန်တော်တို့၏ နားလည်မှုများအား အတော်အသင့် အတိုင်းအတာအထိ ပြောင်းလဲစေနိုင်ခဲ့သည်။ သဘာဝ တရား၏ ဥပဒေသများသည် လွတ်လပ်စွာ ရွေလျှားလေ့လာနေသော ကြည့်ရှုလေ့လာ သူများအတွက် အားလုံးကို အတူတူ … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged ကွမ်တမ်မက္ကင်းနစ်	| Leaveacomment
သိပ္ပံပညာရှင် စတီဖင်ဟော့ကင်း – ၆ တစ်ချိန်က စက်ယန္တရားဆန်သော တရားသေ၀ါဒ ပေါ်ထွန်းခဲ့သေးသည်။ ထိုဝါဒကို Scientific Determinism ဟု နာမည်ပေးကြသည်။ အဓိပ္ပာယ်မှာ “… There should beaset of scientific laws that would allow us to predict everything that would happen in the universe, …” ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ စကြ၀ဠာထဲ၌ … Continue reading →
သိပ္ပံပညာရှင် စတီဖင်ဟော့ကင်း -5 အိုင်းစတိုင်းသည် ကျော်ကြားသော E=MC2 ပုံသေနည်းကို ထုတ်ဖော်နိုင်ခဲ့သည်။ “E” သည် “Energy” ဖြစ်၍၊ “M” သည် “Mass” ဖြစ်ပြီး၊ “C” သည် “Speed of Light” ဖြစ်သည်။ ထို ဥပဒေသ၌ အလင်း၏ အလျှင်ထက် မည်သည့်အရာမှ ပိုမိုလျှင်မြန်စွာ မသွားနိုင်ရ ဟူ၍ ကန့်သတ် သတ်မှတ်သည်။ အားနှင့်ဒြပ် ညီသောအခါ – အားကြီးရန်လိုတိုင်း ဒြပ်ကြီးရမည် ဖြစ်သည်။ အိုင်းစတိုင်းသည် အစဉ်အလာ၏ … Continue reading →
Posted in Buddhism & Science, Frontpage	| Tagged ကွမ်တမ်မက္ကင်းနစ်	| Leaveacomment
Stephen Hawking -4
Posted on July 13, 2010 by chitnge
သိပ္ပံပညာရှင် စတီဖင်ဟော့ကင်း သိပ္ပံပညာရှင်ဟော့ကင်းသည် ဌာနနှင့် ကာလ အကြောင်းအရာများကို လေ့လာခဲ့လေသည်။ ထို အကြောင်းအရာများ နှင့်ပတ်သက်၍ သူ စာအုပ်တစ်အုပ်ရေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သူစိတ်ဝင်စားသော အကြောင်းအရာမှာ – စကြ၀ဠာသည် ဘယ်ကလာပါသနည်း? ဘာဖြစ်လို့ စတင်ဖြစ်ပေါ် လာခဲ့ပါသနည်း? ဘယ်လို ဖြစ်လာပါသနည်း? သူသည် တနေ့ပျက်မှာလား? ပျက်လျှင် ဘယ်လိုပျက်မှာလဲ? စသည့် မေးခွန်းများကို စိတ်ဝင်စားခဲ့သည်။ အဓိက ကတော့ စကြ၀ဠာ၏ ကံကြမ္မာနှင့် အရင်းအမြစ် The Origin and Fate of … Continue reading →